Uhlelo lokusebenza lwezithombe ku-iOS 15 luzosazisa ukuthi izithombe zivela kusiphi isicelo | Izindaba ze-IPhone
U-Ignacio Sala | 14/06/2021 18:00 | iOS 15
Njengoba izinsuku zihamba, bathola Izici ezintsha ezingamenyezelwanga yi-Apple eWWDC 2021, imisebenzi okuthi yize kuyiqiniso ayithakaseli umphakathi jikelele, uma ingaba yabasebenzisi abathile. Omunye wale misebenzi enelukuluku utholakala kuhlelo lokusebenza lwezithombe.
Uhlelo lokusebenza lwezithombe nge-iOS 15, luyasivumela finyelela idatha ye-EXIF yezithombe esikugcine kudivayisi yethu kanye nemininingwane kusuka lapho kuthathwe khona (uma kufaka idatha ye-GPS) kanye neminye imininingwane. Ngaphezu kwalokho, kusivumela nokuthi sazi ukuthi bafinyelele kanjani esondweni lethu.
Ngokuqinisekile ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa, lapho ubukeza i-albhamu yezithombe zakho, uyazibuza ezinye izithombe noma amavidiyo afike kanjani lapho. Nge-iOS 15, ungazi ngokushesha futhi kalula umsuka walezi zithombe.
Njengoba sikwazi ukubona esithombeni esingenhla, phakathi kwemethadatha i-Apple esinikeza yona ngazo zonke izithombe esizigcinayo, imvelaphi yazo nayo iyakhonjiswa. Endabeni yesithombe esingenhla, siyabona ukuthi u-eUmthombo walesi sithombe uhlelo lokusebenza lweSafari.
Uma uchofoza ku-Safari, uhlelo lokusebenza izokhombisa zonke izithombe ezivela emthonjeni ofanayo. Ngethemba ukuthi lo msebenzi ubuye wazi zonke izithombe namavidiyo agcinwe kudivayisi yethu futhi avela ku-WhatsApp.
Umsebenzi ngokungangabazeki ozokwaziswa yibo bonke abasebenzisi abangasungulile ifayela le- ukulondolozwa ngesandla kwezithombe namavidiyo ngaphakathi kokukhethwa kukho kwalolu hlelo lokusebenza lwemiyalezo, njengoba kuzokuvumela ukuthi ubasuse bonke ndawonye futhi ukhulule isikhala esikhulu.
Okwamanje i-iOS 15 itholakala kuphela konjiniyela. Ngeke kuze kube nguJulayi, njengoba kuqinisekiswe yi-Apple, lapho kwethulwa i-beta yokuqala yabo bonke labo basebenzisi abayingxenye ye- Uhlelo luka-Apple lomphakathi lwe-beta.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 15 » Uhlelo lokusebenza lwezithombe ku-iOS 15 luzosazisa ukuthi izithombe zivela kusiphi isicelo